Burner hiantra Parts
Oil faritra paompy
Gas hiantra Parts
Burner Performance endri-javatra
ny mpitantana ny 18-09-04
Al-in-iray Blower. Auto-miasa Manual jiro ho an'ny sehatra iray / dingana roa mipaoka ny fantsona alohan'ny ignition. Safety rafitra mpanaramaso lelafo. Ny rivotra no hanirina vavahady mandeha ho azy, rehefa nijanona ny burner hazakazaka. (Boky manitsy ny rivotra vavahady ho an'ny dingana iray) izany mety ho ny fametrahana, naniraka sy ...
Burner Mariho rehefa mividy
ny mpitantana ny 18-09-03
Mariho rehefa mividy: Ny sary rehetra dia nataon'ny mahomby faneva eny amin'ny fanandramana etona. Ny tena toe-javatra hafa dia mety ho noho ny antony manaraka ireto: a. ny fanerena ny etona Mety tsy ho toy izany koa. Toy izany koa ny fahaizany izay ny burner tsindry mandresy ny etona dia differe ...
Dual Fuel burner Heavy Oil / Entona Teknolojia fampisehoana
1.Alternate gazy metanina / solika mavesatra burner. 2.Air-dranomaso fampifangaroana amin'ny fipoahana-sodina sy ny dingana miandalana roa-output fandidiana. na etona, ir ny sprayer. 3.Ability hahazo tandrify setroka soatoavina amin'ny regu- lating setroka rivotra sy ny fipoahana-sodina. 4.Maintenance nanamora ny zava-misy fa ny mampifangaro sampana iray ...
Sliding / Modulating Light Oil burner Teknolojia fampisehoana
ny mpitantana ny 18-09-02
1.Light menaka burner. 2.Two-dingana miandalana output fandidiana. 3.High milina fanerena atomisation ny solika mampiasa nozzle. 4.Ability hahazo tandrify soatoavina setroka amin'ny alalan'ny rivotra mifehy ny setroka sy ny fipoahana-sodina. 5.Maintenance nanamora ny zava-misy fa ny sampana atomisation azo esorina amin'ny ...
miatrika Baoshan, Shanghai, CHINE
telefaonina + 86-021-56730500